CNC mihodina manodina orinasa tsy miankina vy ary mpamatsy | Ouzhan
Stainless vy CNC manodina fanodinana-namboarina vy mihintsy faritra mihodina
Ny vy tsy misy fangarony koa dia misy singa toa ny Ni, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si, ary Cu. Ny vy mihodina cnc vy dia tena betsaka ary ampiasaina amin'ny sakafo, simika, fiaramanidina ary fananganana. Ny fanodinana lathe dia ampahany amin'ny fanodinana mekanika. Ny fanodinana lathe dia mampiasa fitaovana mihodina indrindra hamadihana ny tontolon'ny asa mihodina. Drills, reamers, reamers, taps, maty ary fitaovana knurling dia azo ampiasaina amin'ny lathe ihany koa ho an'ny fanodinana mifanaraka amin'izany. Ny lathes dia ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny masinina, kapila, tanany ary sangan'asa hafa misy faritra mihodina. Izy ireo no karazan'entana fanodinana fitaovana lehibe indrindra amin'ny orinasa mpamokatra milina sy fanamboarana.
Tombony amin'ny vy mihodina vy Ouzhan
OEM namboarina vy manodina serivisy-China Shanghai CNC vy tsy miova mpanamboatra faritra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny CNC mihodina tsara manodina ny faritra vy tsy misy fangarony azo hatsaraina. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana mahomby sy miasa dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny vy miodina vy faritra. Ho fanampin'izay, ny vokatra vy vita amin'ny vy niova ho an'ny CNC dia manome fatratra ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana izahay ho an'ny vokatra mihodina amin'ny vy vy ho an'ny mpanjifantsika sarobidy.
Fampiharana faritra amin'ny faritra mihodina vy:
Indostrian'ny fiara, fiara, bisy, lamasinina, fiara ambanin'ny tany sy ny faritra hafa.
Tsena dimy mety ho an'ny vy tsy misy fangarony, ao anatin'izany ny indostrian'ny rano, ny indostrian'ny fanorenana, ny indostrian'ny fitaovana ao an-trano, ny indostrian'ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fotodrafitrasa.
- Ny vokatra vita amin'ny vy tsy misy fangarony rehetra vita amin'ny laser dia iharan'ny fizahana kalitao henjana.
- Araka ny sary na ny santionany hanamboarana faritra mihodina vy tsy misy fangarony.
Previous: Fanariana casting alimo aliminioma
Manaraka: Fomba fanosotra hafahafa hafahafa